မာ့ခ်၏ ကိုယ်ပိုင် အတဿ္တများ: October 2008
မိုးတှကေစရှာလာ ကမ်ဘာမွကွေီးက မိုးရတှေကေို လကျခံပးတေယျ
ပျာရြှေငျမုတှေ ဝမျးနညျးမုတှကေို အရာငျေမခှဲခွားပဲနငျ့
色を付けずに - iro wo tsukezu ni ...
夜がきて　朝はどこかで　待ちぼうけ - yorugakite asa wa dokoka de machibouke
ညဘကျရာကျေလာခဲ့ပွနျတယျ၊ မနကျခငျးတှမောတာ့ေ စာငျေ့နခေဲ့ပမေယျ့လညျး
命という　約束ごとは　その中にある - inochi to iu yakusoku goto wa sono naka ni aru
အသကျရငျသနျမုဆိုတာကလညျး ကတိတဈခုလိုပဲ ရိနခေဲ့တာပဲ
その中にある - sono naka ni aru ...
အဲသလို ရိနခေဲ့တာပဲ ....
幸せの鐘が　聴こえる - shiawase no kane ga kikoeru
ပျာရြှေငျခွငျးရဲ့ ခါငျေးလာငျေးသံကို ကွားနရေတယျ
出会いの数だけ　出会いがあるの - deai no kazu dake deai ga aru no
さよならなんて　しなくていいよと - sayonaranante shinakute iiyo to
しなくていいよと - shinakute iiyo to ...
誰かがどこかで　手と手を繋ぐ - dareka ga dokokade te to te wo tsunagu
အခြို့သူတှကေ တနရောရာမာ လကျခငျြးတှဲခငျြတှဲနမေယျ
幸せの鐘を　届けるために - shiawase no kane wo todokeru tame ni
ပျာရြှေငျခွငျးရဲ့ ခါငျေးလာငျေးသံကို ဆကျသဖို့အတှကျ
届けるために - todokeru tame ni ...
私はここから　祈りを捧げ - watashi wa koko kara inori wo sasage
ကိုယျကတာ့ေ ဒီကနပေဲ ဆုတာငျေးပးနေပေါတယျ
まだ見ぬ君の　笑顔のために - mada minu kimi no egao no tame ni
မမွငျခဲ့ရတဲ့ မငျးရဲ့ ရှငျပွုံးနတေဲ့ မကျြနာလးအေတှကျ
笑顔のために - egao no tame ni ...
朝日は必ず　必ず升る - asahi wa kanarazu , kanarazu noboru
မနကျခငျးမာ နေ ကြိနျးသထှေကျပျါလောမာပါ
#ps: bad comments are NOT allowed!
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Wednesday, October 29, 20080comments
ကဏဿဍ : Japanese, Song
1. I used Google Adwords at 2006, I stopped running ads at that time.
2. And I tried to login again at Oct 14 2008, I only login and check my account status.
3. I didnt click / change any payment options, and I didnt set any auto update options from that start.
but SUDDENLY I got this email from Google after 1 or2hours later.
have any questions, please visit the Google AdWords Help Center at
find answers to frequently asked questions anda'contact us' link near
This is to confirm that on Oct 14, 2008, we received your payment of
JPY10,000. This amount has now been applied to your Google AdWords
Your AdWords account number: (DELETED!)
What? I did paid JPY 10,000??? I didnt do any payment! Why?
Google Take Money from People without user Permissions?
Even there is refund options, I feels really bad for this case.
They cancelled it finally, but Istill feels unconfortable, so I have cancelled AdWords Service from my google account finally.
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Friday, October 17, 20080comments
ကဏဿဍ : Google, Shits
Riya - 空に光る
光る宇宙　光る星 hikaru uchuu hikaru hoshi
တာကျေပနတေဲ့ စကွဝဠာ၊ ကွယျပှငျ့လးတှေေ
回り続ける空 mawari suzukeru sora
လညျပတျနတေဲ့ ကာငျေးကငျ (:P)
光る海　光る土 hikaru umi hikaru tsuchi
တာကျေပနတေဲ့ ပငျလယျ၊ မွပွေငျတှေ
僕たちは古代種 bokutachi wa kodaishu
တို့တတှဟော ရးဟောငျေး သတ်တဝါတှပေါ :D
君の手に君の手に kimi no te ni kimi no te ni
輝きを託した kagayaki wo takushita
君の目に君の目に kimi no me ni kimi no me ni
မငျးရဲ့ မကျြအိမျအတှငျးမာ ....
もう何も映さず mou nani mo utsusazu
ဘာမ ထငျဟပျမနခေဲ့ပမေယျ့လညျး ....
少しだけ息を吸った　生きてる sukoshi dake iki wo sutta ikiteru
အသကျရုသံ ဖွးနေးစှောနဲ့ ရငျသနျနသေးတော
泣いてたんだ　その美しさに naitetanda sono utsukushisa ni
ငိုနခေဲ့တာ ဒီလိုလပမုတှမြေိုးနဲ့ ....
တာကျေပနတေဲ့ ပငျလယျ၊ မွပွေငျတှေ အနားမာ
僕たちはその民 boku tachi wa sono tami
တို့တှဟော ရှာသူရှာသားတှေ ပဲလေ..
君のため君のため kimi no tame kimi no tame
မငျးအတှကျ ၊ တကယျမငျးအတှကျ ...
終わらない夢見た owaranai yume mita
မပွီးဆုံးနိုငျသာေ အိပျမကျကို မကျခဲ့တာပဲ
君の目は君の目は kimi no me wa kimi no me wa
မငျးရဲ့ မကျြဝနျးပျါမော ...
遠くをもう見てた touku wo mou miteta
ဟိုအဝးအေထိ မွငျနခေဲ့မာပါပဲ ....
တာကျေပနတေဲ့ ပငျလယျ၊ မွပွေငျတှေ တဝမျးမာ
僕たちは生まれた boku tachi wa umareta
どんな時もこの時も donna toki mo kono toki mo
ဘယျလိုအခြိနျမြိုးပဲဖွဈဖွဈ ၊ အခုလိုပဲဖွဈဖွဈ
そばにはいなくても soba ni wa inakutemo
အနားမာ မရိနတေဲ့ အခြိနျမာလညျးပဲ ...
いつまでもここにいる itsumademo koko ni iru
ずっと見守ってる zutto mimamotteru
ありがとうありがとう arigatou arigatou
ကးဇြေူးပါပဲ၊ တကယျကးဇြေူးပါ ...
声が届かなくても koe ga todokanakutemo
いつまでも祈ってる itsumademo inotteru
အမွဲ ဆုတာငျေးပးနေခေငျြပါတယျ ...
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Tuesday, October 14, 20080comments
ကဏဿဍ : Tips
Do you believe Guest OS run better than Host Machine for most cases?
Thats because of Guest OS can run entirely in RAM without using slow harddisks (with the help of ramdisk)
- First of all you will need decent computer with lots of RAM (eg, 4GB, 8GB)
- If your CPU support Virtualization, thats great.
- To make ramdisk, in linux just mount it /dev/ram0 -> /ramdisk (for eg), for windows, you will need some third-party programs.
- There is lots of VM softwares, i tried in kvm , VirtualBoxOSE in linux and, in windows, i tried VirtualBox and vmware (vmware is great in multimedia support but virtualbox's sound driver is seems experimentals on 64bit machine, not working on mine, maybdepends on host sound card also)
- Another good things is you can backup by copying the whole system easily and on the other hand you can discard the system easily when u did unattended installations or similar problems :-)
- and also you can defrag system with few seconds :D
ကဏဿဍ : OS
Babylon ရဲ့ .bgl လို့ချါတေဲ့ compiled ဖိုငျတှကေနေ Source .gls ကိုပွာငျေးတဲ့ဟာလးပေါ။
ကိုမငျးကျာနြေဲ့ ရာဖှရေငျးနဲ့ တှ့ရေိထားတာလးပေါ။
ဒီဖျာရေမျမာ ဆှးနှေးထေားတာ ကိုလ့လောကွညျ့ရငျ ပိုသိမာပါ။
Compiled ဗားရငျး blggls.zip
c++ ကနေ compile လုပျယူခငျြရငျလညျးရပါတယျ။ forum မာ source code တှပေါပါတယျ။
လိုငျစငျ အကွာငျေးတာ့ေ မပါတဲ့ အတှကျ personal သုံးမယျဆိုရငျ ရနိုငျလာကျေပါတယျ။
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Monday, October 13, 20080comments
ကျနော်ကတော့ CLI ပရိုဂရမ်တွေကို ပိုသဘောကျပါတယ်။ တကယ်ပါ။
ကျနော် ၁၉၉၆ ခုနှစ်လောက်တုန်းက DOS 6.22 နဲ့စသင်ခဲ့ရလို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ BASIC ပရိုဂရမ်ကို စသင်ခဲ့တယ်။
အခုလောလောဆယ် နက်ဝပ်အလုပ်လုပ်နေတာဆိုတော့ Telnet ဆိုတဲ့ ပရိုဂရမ်ကလွဲပြီး ဘာမှမလိုဘူး။
စစ်စတမ် ကတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး လင်းနပ်စ် သုံးပါတယ်။
အချိန်ကုန်မဲ့အရာ၊ မတတ်သာတဲ့အခါမှပဲ ဝင်းဒိုးသုံးပါတယ်။ သုံးရင်လည်း Performance ကိုဦးစားပေးပြီး သုံးလေ့ရှိတယ်။
Themes ဆိုတဲ့ ဆားဗစ် တစ်ခုလုံးပိတ်ပြီး သုံးတယ်။ ဗိုင်းရပ်စကန်ကို တတ်နိုင်သလောက်မသုံးဘူး။
သီချင်းနားထောင်တဲ့ ပလေရာတွေတောင် Skin တွေကိုအကုန်ဖြုတ်ပြီးမှ သုံးလေ့ရှိတယ်။
ဘရောက်ဇာမှာလဲ အရောင်တွေဖြုတ်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ပုံတွေပါဖြုတ်ပြီး ကြည့်တယ်။ မဆိုးလှပါဘူး :D
နဂိုပါလာတဲ့ အင်တာနက် အိတ်စ်ပလိုရာကို ဖြုတ်ပစ်တယ်။
၂။ ၇-ဇစ် ရယ်
၄။ တယ်ရာ တမ်း
၅။ ဒယ်မွန် တူးလ်စ်
Just havealook, there is lots of good stuffs there :-)
And I've realized that one thing is really true.
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Sunday, October 12, 20082comments
ကဏဿဍ : Linux-Unix
First of all, checkout from google svn.
then just build with scons (make sure you already have installed scons)
[email protected]:~/v8$ scons
You will get libv8.a
Then build js shell from sample
[email protected]:~/v8$ scons sample=shell
You will getafile named shell
[email protected]:~/v8$ ./shell
V8 version 0.3.4.1
Run some js test
>   for(var i=0; i<5;i++) print(i);
Wow, Pretty easy huh?
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Sunday, October 12, 20080comments
လောကမှာ သူများလုပ်တာ လိုက်လုပ်တာလောက် သောက်ရှက်မဲ့တာမရှိဘူး။
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Saturday, October 11, 20080comments
You may not be happy about your changing moods today because you cannot settle into enjoying the pleasures that seem so close. Although your current restlessness can get in the way of being happy, there's little you can do to change your dissatisfaction, even if everything looks good on the surface. Paradoxically, it's better to stir things up instead of suppressing change, because ultimately this can reestablish balance faster and assureanew-found stability.
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Thursday, October 09, 20080comments
ဒျါလောစးတြှေပေဲ ကနြတောလား။ ယနျးပဲစးတြေကျတာလားတာ့ေ မသိဘူး။
လာလောဆေယျတာ့ေ တဈဒျါလောကို ယနျး ၁၀၀ ဝနျးကငျြပဲရိတာ့တေယျ။
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Wednesday, October 08, 20080comments
ကဏဿဍ : Unknown
ပရိုဂရမ်ရေးတတ်တဲ့သူတွေဟာ အခြေအနေရရင် ပြန်ပြန်ရေးဖြစ်နေတယ်။
ဘာလို့လဲတော့ မသိဘူး။ သိပ်မစဉ်းစားဖြစ်အောင် လုပ်နေတယ်။
အချိန်တွေတော့ နဲနဲပိုထွက်လာတယ်လို့ ထင်ရတာပဲ။ စက်လဲတော်တော်ပေါ့သွားတယ်။
တခြား လုပ်သင့်တာလေးတွေ လုပ်ရဦးမယ်။
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Monday, October 06, 20080comments
ပျင်းရိခြင်းကို အနိ်ုင်တိုက်နိုင်မယ့် အရာ မတွေ့သေးဘူး။
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Monday, October 06, 20083comments
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Sunday, October 05, 20082comments
Debug commands တွေဟာ ပုံမှန် CER တစ်ခုအတွက် troubleshooting လုပ်ရာမှာ အသုံးဝင်ပေမယ့် ကျနော်တို့ PER ဘက်မှာ တော်ရုံတန်ရုံ မလုပ်ပါဘူး။ ဒေတာ အဝင်အထွက်သိပ်များတာကြောင့် PER Crash ဖြစ်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်လို့ ကျနော် တို့ ပုံမှန် troubleshooting မှာ မသုံးပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ ISDN Backup လိုင်းတွေလောက်မှာပဲ msg တွေလိုအပ်လို့
debug isdn q921 နဲ့ debug isdn q931 ပဲမတတ်သာမှ သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Sunday, October 05, 20080comments
ကဏဿဍ : Cisco, Configurations
BGP soft-reconfiguration ဆိုတဲ့ config ရှိနေမှ clear ip bpg * soft ဆိုတဲ့ command သုံးလို့ရပါမယ်။
soft ဆိုတာမပါရင် BGP session တစ်ခုလုံး reset ဖြစ်သွားပါမယ်။ တကယ့် နက်ဝပ်ကြီးတွေမှာ အဲလိုလုပ်လိုက် customer ဆီက claim ချက်ချင်းရောက်လာမှာ သေချာပါတယ်။ :P
ဒါကြောင့် ကျနော် တို့ကတော့ ရှိသမျှ circuit အားလုံး soft-reconfiguration inbound command ကိုထည့်ထားပါတယ်။
ဒီလို ကြိုပြီး configure လုပ်ထားရင်
တချို့လဲ soft မထဲ့မိပဲ လုပ်မိသူတွေရှိပါတယ်။ custom ကို ပြန်တောင်းပန်ရတာနဲ့ ပိုအလုပ်ရှုပ်သွားကြပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ soft မရိုက်ခင် enter နှိပ်မိမှာစိုးလို့ texteditor မှာ ရေးပြီးမှ copy paste လုပ်ပါတယ်။
ကဏဿဍ : BGP, Cisco, Configurations
Default အနေနဲ့ကတော့ keepalive is 60s, and hold time is 180s
တချို့Carrier တွေနဲ့ Interconnection လုပ်တဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ကတော့ လျှော့ပြီးလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဥပမာ keepalive 5s, hold time 15s
neighbor 172.17.1.2 remote-as 65002
neighbor 172.17.1.1 remote-as 65001
20s အောက်ဆိုရင် IOS က warning တော့ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုအပ်တော့လည်း ပြောင်းရတာပေါ့။